Lahatsoratra nataon'i Lorraine Ball momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Lorraine Ball
Alatsinainy Janoary 18, 2016 Alatsinainy Janoary 1, 2018 Lorraine Ball
Facebook, LinkedIn ary Twitter dia samy nanangona ny tolotra dokambarotra nataony avokoa. Mitsambikina ve eo amin'ny sehatry ny dokambarotra media sosialy ny orinasa kely? Io no iray amin'ireo lohahevitra nozahana tamin'ny fanadihadiana momba ny varotra amin'ny Internet tamin'ity taona ity.
Indray mandeha isan-taona dia mamaky ny baolina kristaly taloha aho ary mizara faminaniana vitsivitsy momba ny fironana izay heveriko fa manan-danja amin'ny orinasa kely. Tamin'ny taon-dasa dia naminavina tsara ny fiakaran'ny doka ara-tsosialy aho, ny anjara andraikitry ny votoaty ho fitaovana SEO ary ny tsy famoahana safidy ny famolavolana finday. Azonao atao ny mamaky ny vinavinako rehetra momba ny varotra 2015 ary ho hitanao hoe akaiky ahoana aho. Vakio avy eo
Sabotsy 9 Novambra 2013 Alarobia, Febroary 9, 2022 Lorraine Ball
Rehefa mieritreritra ianao fa mahay mandray an'ity zavatra marketing amin'ny Internet ity, dia misy buzz vaovao misongadina. Amin'izao fotoana izao, Inbound Marketing no manao ny dingana. Samy miresaka an'io daholo ny rehetra, fa inona izany, ahoana no hanombohanao, ary inona no fitaovana ilainao? Ny marketing miditra dia manomboka amin'ny fampahalalana maimaim-poana, atolotra amin'ny alàlan'ny fantsom-piarahamonina, fikarohana, na dokam-barotra karama. Ny tanjona dia ny hampipoitra ny fahalianan'ny fahatsinjovan-tena ary hahatonga azy ireo hanao varotra
Folo taona lasa izay, voafetra ihany ny safidin'ny marketing ho an'ny tompona orinasa kely. Ny haino aman-jery nentim-paharazana toy ny radio, Tv ary na ny ankamaroan'ny dokam-barotra pirinty aza dia lafo loatra ho an'ny orinasa kely. Avy eo dia tonga ny internet. Ny marketing amin'ny mailaka, media sosialy, bilaogy ary teny doka dia manome ny tompona orinasa kely hanana fotoana hamoahana ny hafany. Tampoka teo, afaka namorona ilay eritreritra ianao, lehibe kokoa ny orinasanao noho ny fanampian'ny tranonkala iray lehibe sy fiaraha-monina matanjaka
Enimpolo taona lasa izay rehefa nipoitra ny seho tao amin'ny fahitalavitra, dia nitovy tamin'ny doka tamin'ny radio ny doka fahita. Izy ireo dia misy pitchman iray mijoro eo alohan'ny fakan-tsary, mamaritra ny vokatra iray, mitovy amin'ny fomba fanaony amin'ny radio. Ny tsy nitovizany dia ny fahitanao azy mitazona ny vokatra. Rehefa matotra ny fahitalavitra, dia toy izany koa ny dokam-barotra. Rehefa fantatry ny mpivarotra ny herin'ny fampitaovana maso dia namorona doka izy ireo hampihetsi-po ny hafa, ny sasany mampihomehy, ny hafa